Global Voices teny Malagasy » Tatitra Isan-taona Momba Ny Toerana Misy Ireo Mpiaro Ny Zon’Olombelona Any Shina, 2011 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Marsa 2012 2:53 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika miora
Sokajy: Shina, Fisamborana sy faneriterena, Fitsipika, Hafanam-po, Lalàna, Mediam-bahoaka, Fitantanana-aterineto
Namoaka  ny tatitra isan-taonany momba ny raharahan'ireo mpiaro ny zon'olombelona any Shina (2011) ireo Sinoa Mpiaro ny Zon'olombelona. Na teo aza ny fanakatonana mafy ny Aterineto, manohy miady amin'ny fitaovana fanivanana ireo mpampiasa aterineto sy ireo mafana fo. Ireto ambany ireto no famintinana vitsivitsy ny sombiny amin'ny “fahalalahana miteny” avy amin'ilay tatitra.
Nanaitra ny governemanta Sinoa ny Jasmine Revolution tany Afovoany Atsinanana mba hanamafy ny fanaraha-maso ny Aterineto:
Nanohy nanakatsakana ny fahalalahana miteny ao amin'ny aterineto ny governemanta ary nanandrana nisakana ny fanapariahana ny fampahalalana momba ny zon'olombelona. Notazonin'ireo manampahefana hatrany ny fanivanana, tamin'ny famoahana lisitrana tenifototra tsy azo ampiasaina, famoahana lalàna fanaraha-maso, na “torolàlana”, ny fitaterana amin'ny media sy ireo resadresaka momba ny aterineto, fanakatonana vohikala, bilaogy ary bilaogy bitika, sy ny fanatsaharana nandritra ireo “vanim-potoana nafanafana,” ary hatramin'ny antsoina hoe fanatsoahana ny “resa-betaveta” sy ireo “tsaho.”
Ankoatra ny fanavaozana ny haavo lentan'ny Rindrimbe amin'ny fanakanana ireo vohikala avy any ivelany sy ny fanivanana ireo tenifototra, manakotaba ny VPN sy ireo fitaovana hafa fialàna amin'izany ihany koa ny manampahefana mba hanakanana ny vahoaka Sinoa tsy hifandray amin'ireo mpanohitra avy any ivelany. Ho fanampin'izay, voakendry amin'ilay fandrindràna ihany koa ny sehatry ny bilaogy bitika:
Ny fivoaràna nanaitra indrindra tamin'ny 2011 dia ny fampidiran'ny governemanta ny fitakiana ny fampiasàn'ireo mpitoraka bilaogy bitika ny tena anarany rehefa manao ny fisoratana anarana hanokatra kaonty izy ireo. Ilay tontolon'ny bilaogy kiritika tao an-tanàna izay nandry fahalemana dia hita fa nahery vaika tokoa tamin'ny famborahana ny fahadisoan'ny governemanta nandritra ireo taona vitsy lasa, nefa voarahona izy ankehitriny noho izany fitakiana izany.
Taorian'ny resabe maro momba ny fampidirana azy io, nambara tamin'ny faran'ny taona fa hapetraka any Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou, ary Shenzhen izany. Koa satria any no ipetrahan'ireo tambajotran'ny aterineto mahazatra miandraikitra ny bilaogy bitika any Shina—Sina sy Tencent— any Beijing sy Shenzhen, heverina hiantraika amin'ny ankamaroan'ireo mpampiasa bilaogy bitika voasoratra anarana miisa 250 tapitrisa any Shina izany fepetra vaovao izany.
Na dia izany aza, namolavola tetikady amin'ny fiatrehana ireo fepetra fanivanana vaovao ireo mafàna fo:
Nanamarika ny fiakaran'ny fahasarotan'ny fahafahana miditra sy mampiàsa ireo bilaogy bitika ihany koa ireo mafana fo, nefa nilaza izy ireo fa nisy fomba hialàna amin'izany sy ireo fepetra fanivanana hafa. Ohatra, “manangana vohikala marolafy, bilaogy ary bilaogy bitika maro” izy ireo ary “manova matetika ny… fitaovana entiny misera sy ireo adiresy mailaka” mba hahasarotra ny fanarahan'ireo manampahefana ny fihetsik'izy ireo. Rehefa voafafa ireo bilaogy bitika ireo, faingana ny mpampiasa aterineto “namerina namelona” izany avy amin'ny fanamboarana kaonty vaovao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/03/14/30068/